Maitiro ekubatsira vaviri vacho kukunda duel | Bezzia
Maria Jose Roldan | | Hukama
Kufirwa nemunhu waunoda ndechimwe chezvinhu zvakaipisisa zvinogona kuitika kumunhu. Maitiro ekuchema akaoma uye kuve nemumwe munhu ari padyo newe kuti akubatsire kuenda kuburikidza nekufungidzira kwakadaro kwakakosha. Mukusuwa chinhu chepfungwa chakakosha uye zvakajairika kuti munhu anotambura anzwe hasha, hasha kana kushaya simba.
Sezvakatarisirwa, Manzwiro akadaro anokanganisa ramangwana rakanaka revakaroorana. Ndosaka vaviri vacho vaine basa rinokosha mukubatsira mumwe munhu kukunda nguva yekuchema.
Mitemo yekutevera kubatsira vaviri kukunda kurwisana
Chinhu chinonyanya kukosha kana zvasvika pakubatsira vaviri vacho kukunda dambudziko rakaoma serufu rwemudiwa, Ndekuinzwira tsitsi uye kuratidza tsigiro yose inobvira. Kubva pano zvinokurudzirwa kutevedzera nhevedzano yenhungamiro kana matipi:
Kuramba inguva yakaoma iyo ani nani ari mukuchema anopinda mairi. Basa revakaroorana rinofanira kuva rekuedza kuita kuti munhu agone kugamuchira kurasikirwa uye yekusiya kuregeredza kune zvese.
Munguva dzakaoma kudaro, munhu anenge afirwa haafaniri kunzwa ari oga. Ibasa revaviri kuvatsigira mune zvese zvinodiwa uye ita kuti aone kuti haasi ega. Kumbundirawo zvako kana kuti kurukurirano inogona kuva yakawanda kupfuura yakakwana kukubetsera kugonana nenhamo.
Hazvina kunaka kuti munhu ari kuchema anyarare manzwiro ake. Zvinonyanya kukosha kuti ugone kutaura zvaunonzwa chaizvo nguva dzese. Vakaroorana chikamu chinokosha apo munhu anotambura nenhamo anokwanisa kuunza pachena manzwiro akasiyana.
Kushungurudzika inzira yakareba uye yakaoma iyo inogona kukuvadza chero rudzi rwehukama. Vaviri vacho vanofanira kunge vachitarisira hukama hwambotaurwa nepavanogona napo uye vadzivise nguva dzese kuti hunogona kugumbuka. Iwe unofanirwa kuziva kuchengetedza mumwe wako, kuitira kuti zvishoma nezvishoma iwe ugone kukunda iyo yakaoma uye yakaoma nguva. kwakadii kufa kwemudiwa.
Zvinonyanya kukosha kuti munhu akarasikirwa anogona kunzwa akasununguka kurwadziwa kwavo uye pfuura nemuzvikamu zvakasiyana zve duel pasina dambudziko. Vaviri vacho vanofanirwa kuve sosi yetsigiro kana tsigiro asi kwete kuve munhu anomanikidza kuitira kuti kudarika nemuduwa kuve nekukurumidza sezvinobvira. Kana chikamu chekushungurudzika chikatora nguva yakareba kupfuura yaitarisirwa, zvakanaka kuenda kune nyanzvi kuti ikubatsire kukunda dambudziko iri.
Muchidimbu, hazvisi nyore kana kuti nyore kuva nomunhu wawakaroorana naye ari kuchema rufu rwomudiwa. Muzviitiko izvi, tsigiro yemudiwa inova yakakosha uye inofanirwa kuitira kuti nzira yakadai ikundwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Hukama » Nzira yekubatsira mumwe wako kukunda kushungurudzika
Magetsi bhuruu, yazvino uye ine ushingi ruvara rweimba yako